banaadir – Page 2 – Banaadir Times
Home Articles posted by banaadir (Page 2)
Taliyaha Booliiska Gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa ka badbaaday qarax ismiidaamin ah waxaana taliye oo Goordhaw la hadlay Warbaahinta ayaa xaqiijiye in qaraxa lala beegsaday gaarigiisa. Taliye Farxaan Qaroole ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyey in uu ka badbaaday qaraxaasi, islamarkaasina uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa ayaa sigaar ah kaga dhacay
Maamulka Hir-Shabeelle oo Wafdi u diraya degmada Buulo-Burde
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Hir-Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa waxaa la filayaa in Maanta oo Sabti ah inay tagaan degmada Buulo-burde ee Gobolka Hiiraan. Wafdi Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle waxaa qeyb ka ah Wasiirro iyo Xildhibaano ka tirsan Hirshabelle, Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan iyo saraakiil Ciidan.
Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Puntland ayaa howlgallo qorsheysan waxaa xalay saqdii dhexe ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan dhinaca Waqooyi ee Magalada Gaalkacyo xarunta Gobolka Mudug. Howlgalka ayaa sida la sheegay waxaa uu ka dhan ahaa kooxaha ka ganacsada maandooriyaha, gaar ahaanna Khamriga.kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay siweyn ugu soo batay Magaalada
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxaa la filayaa in Maanta oo Sabti ah inay tagaan degmada Garbahaareey ee Xarunta Gobolka Gedo. Shalay degmada Garbahaareey waxaa gaaray wafdi ka socda Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha si ay ugi sii diyaariyaan soo dhaweynta iyo Odayaal dhaqan iyo mas’uuliyiin kale. Ra’iisul
By banaadir 9th July 2021 No comment
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay Munaasabad uu musharaxnimadiisa Xildhibaan uu ku shaacinaye Liibaan Maxamed Cabdi oo u tartamaya kursi uu tirsigiisa yahay Hop 102, islamarkaasina lagu dooran doono magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo. Kulan ayaa ahaad mid ay kasoo qeybgaleen qeybaha kala duwan bulshada kursiga wax ku leh, sida Dhaqanka, Dhalinyarada